Umzobi uyila kwaye athengise ngoChucky owenziwe ngesandla kunye noBilly Mogwai Dolls
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	Umzobi uyila kwaye athengise ngoChucky owenziwe ngesandla kunye noBilly Mogwai Dolls
by UTrey Hilburn III Novemba 11, 2020
by UTrey Hilburn III Novemba 11, 2020 20,636 imbono
Ayisiyonto yemihla ngemihla ukuba uMogwai ebe intliziyo yakho. Kodwa, namhlanje lolunye lwezo ntsuku. Igcisa le-Etsy lenze umsebenzi omangalisayo wokuwela umhlaba kunye nawo Play Child, isarha kwaye Gremlins oko kusishiye sididekile. Umcimbi wethu ngoku kukujonga ukuba yeyiphi kwezi zinto kufuneka sibe nazo kuqala.
Umzobi we-Etsy, u-Oili Varpy wenza oonodoli abahle abenziwe ngezandla baseMogwai abadityaniswe ngocwangco kunye nangokwezifiso. Ukuba ujonga imisebenzi yakhe, ukongeza kuBilly uPuppet kunye noChucky uyilo oluninzi lwabanye.
Abanye babo bathatha indawo enomdla kwaye bacinge iGrmlin kwifom yaseMogwai. Unomxube omnandi weBaby Yoda odityaniswe neMogwai. Kukho enye apho enokusinika into enzulu Aahh !!! Izilo zoqobo I-vibes.
Nganye kwezi yenzelwe uku-odola kwaye nganye nganye ithathe ubuncinci beeveki ezili-10 ukuyenza kunye nokuthumela ngaphandle. Umda wexesha kuloo nto awubi mbi kwaphela ukuba ujonga nje umgangatho ongaqhelekanga oza kuwufumana.
Zonke ezi ziyamangalisa. Ukuqwalaselwa kweenkcukacha nganye kwezi kuyamangalisa. Yongezwe kuloo nto khange ndicinge ukuba kukho umahluko kaBilly the Puppet onokuba yile drobz yalahlekileyo.
Ucinga ntoni malunga nendalo ka-Oili Varpy's Mogwai? Sazise kwicandelo lamagqabaza. Owu, kwaye ukuba ugqibela ngokuthenga naye mxelele iHorror ithunyelwe! Ukujonga ivenkile epheleleyo INTLOKO APHA.
Jonga ngolwesiHlanu omangalisayo izinto ze-13 onokuzithenga kwi-Etsy.